चुलिँदै बेलायती राजनीतिक–आर्थिक संकट – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
चुलिँदै बेलायती राजनीतिक–आर्थिक संकट
तेस्रो पटक पनि ब्रेकजिट अस्वीकृत
प्रकाशित मिति : २०७५ चैत्र १६
काठमाडौं । बेलायतमा निकै बहस भइरहेको ब्रेक्जिट संकट समाधान हुनुको सट्टा अझै चुलिँदै गएको छ । प्रधनमन्त्री टेरिजा मेद्वारा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गरिएको ब्रेकजिट प्रस्ताव तेस्रो पटक पनि बेलायती संसदले अस्वीकृत गरेको छ ।
यसले टेरिजा मेको अन्तिम शासनकाल निकै तीतो र असफल बनाएको छ भने बेलायतको राजनीतिक आर्थिक भविष्यमाथि पनि केही रणनीतिक गाम्भीर्यताका प्रश्नहरु उठाएको छ । के बेलायत आजको संसारमा ईयुबाट बाहिरिएर गति लिन सक्छ ? वा, ईयुसँग अभिन्न भई त्यसैमा रहेर जाँदा मात्र यसको भविष्य छ ? वा, राजनीतिक हिसाबले मात्र टेरिजालाई असफल पार्न असन्तुष्ट पक्ष र प्रतिपक्षबाट यसो गरिएको छ ? यसको जबाफ आफैमा स्पष्ट छैन ।
तर घटनाक्रम र बेलायती संसदको मतले भने बेलायत ईयुबाट अलग्गिएर रहन नसक्ने देखाएको छ । हालका बेलायती शासकको बेलायतलाई अमेरिका जस्तै संरक्षणवादी अर्थनीतिको बाटोमा हिंडाउने आशय रहेको प्रष्ट बुझिन्छ । तर बहुमत प्रतिनिधिहरुको भने ईयु संलग्ना नै उत्तम विकल्प रहेको संकेत देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री मेले आफूले अघि सारेको ब्रेकजिटको प्रस्ताव संसदबाट पारित भएसँगै आफूले राजीनामा दिएर राजनीतिबाट सन्यास लिने भनी गरेको प्रतिबद्धता पनि पूरा हुन पाएको छैन ।